Hetsiky ny Tim : “Nolavin’ny Prefet ny fangatahana fahazoan-dalana” -
AccueilRaharaham-pirenenaHetsiky ny Tim : “Nolavin’ny Prefet ny fangatahana fahazoan-dalana”
28/07/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Mazava. Mitetika ny hanangon’olona etsy amin’ny kianjaben’i Mahamasina fanindroany indray ry Marc Ravalomanana sy ny antokony, Tiako i Madagasikara na Tim, ny sabotsy 29 jolay izao. Nanao fangatahana teny anivon’ny Prefektioran’ny polisy izy ireo amin’ny hanatanterahana izao hetsika fankalazana ny faha-15 taona nijoroan’ny antoko Tim izao.
Mazava avy hatrany anefa ny valitenin’ny “Prefet”, Angelo Christian Ravelonarivo. “Tsy nahazo fahazoan-dalana hanatanteraka hetsika sy famoriam-bahoaka eo amin’ny kianjan’i Mahamasina ny antoko Tim”. Raha ny fanazavana, efa nisy ny fivoriana notanterahin’ny komisiona telo tonta na ny OMC (Organisation Mixte de Conception), ahitana ny mpitandro filaminana sy ny manampahefana sivily, nanapahana io tsy fanomezan-dalana io ary koa nidinika mikasika ny fepetra rehetra horaisina amin’io andro io raha toa ka misy zava-mitranga.
Araka izany, tsy azon’ny antoko Tim atao ny mampiasa ny kianjaben’i Mahamasina sy ny mamory vahoaka amin’io andro sabotsy 29 jolay io. Noho izany, hakatona manomboka anio ny kianjaben’i Mahamasina ary hiantrana hiambina io toerana io ny mpitandro filaminana.
Voalaza ihany koa fa raha toa ka mbola miziriziry amin’ny heviny hanao amboletra ny avy amin’ny antoko Tim ka misisika ny hitondra olona eny an-toerana ihany dia handray ny fepetra rehetra mifanandrify amin’izany ny tompon’andraikitra. Noho izany, raha ny fanazavana hatrany, tsy maintsy hisy ny fanaparitahana ireo olona avy amin’ireo antoko Tim mivorivory sy mikononkonona eny amin’ny manodidina.
Ankoatra izay, hisy ihany koa ny fivezivezen’ny mpitandro filaminana amin’ireo toerana saro-pady rehetra, toy ny eny Anosy, Analakely sy ny manodidina ankoatra ny eny amin’ny toerana kasain’ny Tim hanatanterahany ny fankalazana ny faha-15 taonany io.
Tsiahivina mantsy fa rehefa nolavina ny fangatahan’izy ireo tamin’ny hetsika nokasainy hatao teo aloha, ny 8 jolay teo, niteraka korontana sy savorovoro teny Analakely sy ny manodidina izany. Noho izany, tsy handefitra amin’izy ireo sy ny fihoaram-pefy mety ho ataony amin’io andro io ny mpitandro filaminana sy ny tompon’andraikitra mahefa rehetra. Araka ny efa voalaza sy nambara matetika fa tsy misy olona na fikambanana sy antoko ambonin’ny lalàna. Tany tan-dalàna i Madagasikara, noho izany, hampiharina amin’ireo izay tsy manara-dalàna ny lalàna mifanaraka amin’ny adalana sy fihoaram-pefy ataon’ny tsirairay.
Nigadona teto Madagasikara ny sabotsy 7 Janoary teo ny minisitry ny Raharaham-bahiny sinoa Wang Yi. Avy hatrany dia noraisin’ny filohan’ny Repoblika, Hery Rajaonarimampianina, teny amin’ny lapam-panjakana Iavoloha ity minisitra sinoa ity. Tsy tongatonga ho azy ...Tohiny